Ny kinova vaovao an'ny rafitra fandefasan-kafatra Mattermost 5.22 dia efa navotsotra | Avy amin'ny Linux
Ny fanombohana ny ny kinova vaovao an'ny rafitry ny fandefasana hafatra fampiantranoana "Ny zava-dehibe indrindra 5.22", Izay mifantoka amin'ny fanomezana fifandraisana eo amin'ny mpamorona sy ny mpiasan'ny orinasa.
Mattermost dia napetraka ho mpisolo misokatra ny rafitry ny fifandraisana Slack ary ahafahanao mandray sy mandefa hafatra, rakitra ary sary, manara-maso ny tantaran'ny resaka ary mahazo fampandrenesana amin'ny finday avo lenta, takelaka na PC. Manohana ireo modely fampidirana malemy-vonona ary fanangonana modely vazimba marobe no omena ho fampidirana an'i Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN, ary RSS / Atom.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Mattermost 5.22?
2 Ahoana ny fametrahana Mattermost amin'ny Linux?
Inona no vaovao ao amin'ny Mattermost 5.22?
Ity kinova vaovao an'ny Mattermost ity misy ny fanavaozana ny fiarovana sasany ary ny fanovana sasany izay Asongadiny ny plugin Confluence, izay ampiasaina handefasana fampandrenesana amin'ireo fantsona Matterest indrindra rehefa misy fanehoan-kevitra sy fanavaozana vaovao hita ao amin'ny Atlassian Confluence.
Nasongadina ihany koa ny fanatsarana ny fananganana fantsona ary fifehezana malefaka amin'ny fampisehoana fantsona eo amin'ny tontonana, ohatra, azonao atao ny mandrodana sokajy, manivana fantsona mbola tsy novakiana, mamaritra ny fantsona nojerena vao haingana, sns.
Etsy ankilany dia voalaza izany ny admin dia afaka mampiasa alalana vaovao voafaritra amin'ny fantsona, hamoronana fantsona amin'ny maody famakiana fotsiny ary izay ho an'ny mpampiasa sasany dia tsy azo soratana, ohatra, fantsona hamoahana doka, na koa hamorona fantsona antonony izay ny mpanelanelana ihany no afaka mampiditra na mamafa ny mpampiasa ary manasongadina ihany koa ny fifehezana fantsona vaovao fizarana amin'ny toe-javatra.
Momba ny famokarana fampidirana hitsin-dàlana hanova ekipa ary ny fahaizana mandamina indray ny ekipa eo amin'ny sisin'ny sisiny amin'ny drag and drop.
Ary koa, ny fahaizana mamerina amin'ny laoniny ny hetsika ho an'ny fantsona nafindra tany amin'ny sokajy archive avy amin'ny interface an'ny mpampiasa nefa tsy mampiasa ny fampiasana ny command line.
Finalmente raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao Momba an'ity kinova vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany amin'ny fanambaràna ilay kinova vaovao. Ny rohy dia ity.
Ahoana ny fametrahana Mattermost amin'ny Linux?
Ho an'ireo liana afaka mametraka Mattermost amin'ny rafitr'izy ireo, tokony handeha amin'ny tranonkala ofisialin'ny fampiharana ary amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny mahita ireo fizarana isaky ny fizarana Linux tohana (ho an'ny mpizara). raha ho an'ny mpanjifa dia atolotra ireo rohy ho an'ireo rafitra samihafa birao sy rafitra fikirakirana finday. Ny rohy dia ity.
Raha ny fonosana mpizara, Manolotra fonosana ho an'ny Ubuntu, Debian na RHEL izahay, ho fanampin'ny safidy fampiharana miaraka amin'i Docker, fa mba hahazoana ilay fonosana dia tsy maintsy manome ny mailakay izahay.
Azonao atao ny manaraka ity torolàlana fametrahana ity, tsy mitovy amin'ny fametrahana fonosana fotsiny izy io, fa ny configurement hendry dia mitovy amin'ny distro rehetra. Ny rohy dia ity.
Amin'ny lafiny client, ho an'ny Linux dia omena fonosana deb na fonosana tar.gz izahay (ho an'ny ankapobeny amin'ny Linux).
Ny fametrahana ny fonosana deba dia azo atao amin'ny mpitantana fonosana tianao na avy amin'ny terminal miaraka amin'ny:
Raha ny fonosana tar.gz dia esory fotsiny ilay fonosana ary alefaso ao anaty fampirimana ilay rakitra "desktop most matter".
Finalmente ho an'ny Arch Linux dia efa voaangona ny fonosana iray ho an'ny fizarana na ny derivatives azy, ao anatin'ny repositories AUR.
Raha te-hahazo izany dia mila manana ny tahiry AUR afaka mandeha ao anaty rakitra pacman.conf fotsiny izy ireo ary efa nametraka yay.
Ny fametrahana dia vita amin'ny baiko:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Efa navoaka ny kinova vaovao an'ny rafitra fandefasana hafatra 5.22